မတွေးစကောင်း တွေးစကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မတွေးစကောင်း တွေးစကောင်း
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 9, 2010 in Drama, Essays.. |6comments
ကိုပေါက် လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေး
တစ်ရက်ကျနော်မန္တလေးတောင်ခြေက ကျောက်တော်ကြီးဘုရားကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို.ရင်းနဲ.ရောက်ပါတယ်။
ဘုရားအရိပ်ဆိုတာ တကယ်အေးမြတယ်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်ဆိုတာ ဘုရားကိုရောက်တိုင်းခံစားရပေမဲ.မှန်တာပြောရင်
ကျနော်နဲ.ကျနော်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဘုရားကို ၀င်ကန်.တော. ရင်းအလွန်ကြီးမားသော ကျောက်တစ်လုံးထဲမှထုဆစ်ပူဇော်လို.
ရလာတဲ. တန်ဘိုးဖြတ်လို.မရနိုင်တဲ.ရှေးမြန်မာအစွမ်းကို အရမ်းကိုလေးစားမိသလိုနားထဲမှာစည်တီးသလိုကြားနေမိတာကတော.
နန်းတော်ရှေးဆရာတင်ရေးစပ်လို.အဆိုတော်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်ဆိုခဲ.ပြီးပြီုဖစ်တဲ.” မြန်မာ.ဂုဏ်ရည်”
” ကျောက်တော်ကြီးဘုရားက များအံ.လောက်ပေသည် စမ်းကျတဲ.ရေအလျှင်ရွေကျင်နန်းက ရတနာပုံ မြန်းကြွတဲ. ”
ဆိုပြီး ရွှေကျင်ကနေကျောက်တော်ကြီးဘုရားမန္တလေးမြို.ကိုရောက်လာပုံကိုရေးဖွဲ.ထားတာကနေ သီချင်းအချပိုဒ်ရဲ.အဆုံးမှာပါတဲ.
သည်စာလေးကို နားထဲမှာကြားမိရင် သည်လိုကြီးမားတဲ.ခက်ခဲတဲ. ကိစ္စတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ.နိုင်တဲ.ရှေးမြန်မာကြီးများကိုလေးစားမိသလို မြန်မာဖြစ်ရတာကိုလည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဆက်ပြီးကိုယ်ကို ကိုယ်လည်းရှက်မိပါတယ်။ သူတို.လိုငါမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေးမိလို.ပါ။
သည်လိုနဲ.ကျနော်တို.နှစ်ယောက် ဘုရားကိုလက်ယာရစ်ပါတ်လို.ကြီးမားကျယ်ဝန်းတဲ.အေးမြတဲ.ဘုရားပရ၀ုဏ်ထဲကနေ အရှေ.ဖက်အပေါက်ကတဆင်.အပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်။
အပြင်ကိုလည်းရောက်ရော ဘုရားအတွင်းမှာတုန်းက ရထားတဲ.ပီတိတွေကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပါတယ်။
အပ်ထားတဲ.ဆိုင်ကယ်ကိုရွေးနေတုန်း ကျနော.တင်ပါးကိုနောက်ကနေ တခုခုနဲ.ထိနေသလို ထင်လို.လှည်.ကြည်.လိုက်တော.
အရွယ်မရောက်သေးတဲ.8နှစ်သားလောက်သူတောင်းစားပေါက်စလေးက သူ.ထက်အရွယ်မရောက်သေးတဲ.တစ်နှစ်သားကျော်ကျော်လောက်ရှိတဲ.ကလေးလေးကို ခါးထစ်ခွင်ချီရင်းကျနော်ဆီက ပိုက်ဆံတောင်းနေတာပါ။
သနားစရာအသံကလေးနဲ.မပေးမချင်း တတွတ် တွတ် ကပ်တောင်းနေတော. ပါလာတဲ.မိတ်ဆွေက မနေနှိုင်တော. ဘူးထင်ပါတယ် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလည်းလက်လှမ်းတာကိုလည်းမြင်ရော ကျနော်က မပေးဘို.ဟန်.လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်က ဆက်ပြီးကလေးကိုသွားဘို.ပြောလိုက်တဲ.အခါမှာ ဆိုင်ကယ်အအပ်ခံတဲ.ဆိုင်က အဒေါ်ကြီးက
“ငါ.တူသွားမပြောနဲ. သည်ကလေးတွေကိုခိုင်းစားနေတဲ.လူက မကျည်းပင်အောက်မှာ “ဆိုပြီး လမ်းအရှေ.ဖက်ကို မသိမသာလေးမေးငေါ.လို.ပြပါတယ်။
မှန်ပါဗျား ကျနော်တို.ဘက်ကို ပေစောင်းစောင်းနဲ.လှမ်းအကဲခတ်နေတဲ.သူတစ်ယောက်ကိုမြင်ရတယ်။
သူတို.က သည်အနားမှာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရရှာတော. သူ.ဆိုင်လာတဲ.သူနဲ.ပြဿနာတက်မှာစိုးတယ်နဲ.တူပါတယ်။
နောက်နေ.မနက်ရောက်ပြန်တော. 73လမ်းက အသိတစ်ယောက်အိမ်ဆီ
မိတ်ဆွေကိုလိုက်ပို.ဘို.အသွားမှာ 35လမ်း ကုန်းကျော်ကိုရောက်တော.
မီးနီမိလို.အရပ်မှာ မနေ.ကလို အရွယ်မရောက်သေးတဲ. သူတောင်းစားလေးတွေကိုတွေ.ပြန်ရော။
ဒါနဲ.အသိကိုဝင်ခေါ်လို. သူ.အိမ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုထိုင်လို. စကားလေးပြောနေတုန်း
အဲသည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတုန်းမှာအသားညိုညိုနဲ.မယ်သီလရင် ၀တ်စုံ(မယ်သီလရင်ဝတ်စုံလို.သုံးတာ သူသည်မယ်သီလရင်အစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လို.ပါဘဲ)၀တ်ထားတဲ.မိန်းမတစ်ယောက်က
နောက်ထပ်ရောက်လာတာကတော. ခပ်ငယ်ငယ်ကိုရင်လေးတွေကတစ်ခါ အသက်ကြီးကြီးဦးဇင်းတစ်ပါးကနောက်မှရောက်လာပါသေးတယ်။
(2-5-2010)နေ.မှာ ကျနော်အလုပ်ကိစ္စနဲ.ရွှေလီဘက်ကို သွားဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို. ကျယ်ဂေါင်ကတစ်ဆင်.ရွှေလီထဲကိုဝင်ဘို. ဧည်.လက်မှတ်လုပ်နေတုန်းမှာလဲ
မြင်ရတော. ငါနှယ်.ခုတစ်လော အရွယ်မရောက်သေးတဲ.သူတောင်းစားလေးတွေနဲ.တော်တော်ကို ရေစက်ပါနေပါလားလို. တွေးမိပြီး ရီချင်လာပေမဲ. ရင်ထဲမှာဆို.နင်.လာသလိုခံစားရပါတယ်။
ဒါနဲ.ညရောက်လာလို. ကျနော်အလုပ်ကလူတွေနဲ.ရွှေလီထဲက ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားနေတုံးတခွပ်ခွပ်နဲ.ခွက်ခေါက်သံကြာတော.တွေးလိုက်ရတာက အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ. တရုပ်အဘိုးကြီးနဲ.အဘွားကြီးက ပိုက်ဆံတောင်းနေတာပါ။
တရုပ်ငွေတစ်ကျပ်ဆိုတာ ခုရက်ငွေဈေးနဲ.တွက်ရင် မြန်မာငွေ 147 ကျပ်လောက်နဲ.တူပါတယ်။
(ကြုံလို. မသိသေးတဲ. သူတွေအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ.ပြောရင် တရုပ်ဘက်နဲ.အလုပ်လုပ်ကြသူများပြောနေတဲ.တရုပ်ငွေဈေးဆိုတာ မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်ရာပေးရင် ပြန်ရမဲ. တရုပ်ငွေပြားဂဏန်းကိုပြောတာပါ။
ဥပမာ ဒီနေ.ငွေဈေးက .68 လို.ပြောရင် အဲဒါ မြန်မာငွေ တစ်ရာပေးရင်ပြန်ရမဲ.တရုပ်ငွေပြားဂဏန်းပါ။
တရုပ်ငွေတကျပ်ကို မြန်မာငွေဘယ်လောက်နဲ.ညီမျှသလဲသိချင်ရင်တော.100ကို တည်လို.ပေါက်ဈေး .68နဲ.စားပါ
ရလတဲ.ဂဏန်း 147ကျပ်သည် တရုပ်ငွေတစ်ကျပ်နဲ.တန်တဲ.မြန်မာငွေပါ။
ကျနော်ပြောတဲ.ပေါက်ဈေးဆိုတာ နေ.စဉ် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ.ပေါက်ဈေးကိုဆိုလိုတာပါ။)
ဒါနဲ.ညတည်းခိုတဲ.အိမ်ကိုရောက်လို. ထိုင်နေတုန်းမှာ ကျနော်နဲ.အတူပါလာတဲ.မိတ်ဆွေက
ကျနော်.ကို ” ကိုပေါက် ကျနော်နားမလည်တာလေးတစ်ခုတော.ခင်ဗျားကိုမေးချင်တယ်”
လို.သူကပြောတော. ကျနော်က ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တဲ.အခါမှာ
” သူတောင်းစားတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ “ပါတဲ.။
” မရှိသင်.တဲ.လူတန်းစားတစ်ရပ်ပေါ. ” လို.ပြန်ဖြေတဲ.အခါ သူကဆက်လို.
“ကျနော်ခင်ဗျားနဲ.အတူသွားနေတာ သုံးရက်ရှိပြီ ဘယ်သူတောင်းစားမှ ပိုက်ဆံမထည်.ဘဲမောင်းထုတ်တယ်
ခုနက တရုပ်ကအဘိုးကြီးကျတော. ထည်.တယ်ဗျာ ကျနော်တော.နားမလည်ဘူး” လို.မေးပါတယ်။
” ကျနော်က တကယ်ကို မလုပ်နိုင်တော.တဲ.သူဆိုရင်ထည်.တယ် ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်နဲ.ပါ လုပ်စားနိုင်ရဲ.နဲ.တောင်းတဲ.ကောင်တော. ခင်ဗျားမြင်တဲ.အတိုင်းဘဲ “လို.ဖြေလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ပြောပြော သူတောင်းစား ရှိနေသမျှကာလပါတ်လုံး
သူတောင်းစား ကို ကျနော်ကတော. (4)မျိုးစာရင်းခွဲထားပါတယ်။
ှ (1) .သားထောက်သမီးခံမရှိတဲ. သက်ကြီးရွယ်အို တွေ အကြောင်းအမျိုးကြောင်. ခန္ဒာကိုယ်ချို.ယွင်းသွားပြီးတကယ်ကို
(2) လူမိုက်တွေကလေးသူငယ်တွေကို အတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင်.လို.လက်သပ်မွေးထားပြီး
(3) လုပ်မစားချင်တဲ.သူတွေက ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးကိုငှားလို.ဖြစ်ဖြစ် သူ.ကလေးတွေနဲ.ဘဲဖြစ်ဖြစ်
(4) ဘာသာရေးကိုဘန်းပြလို.မယ်သီလရင်လိုလို ဘုန်းကြီးလိုလိုနဲ. ကျနော်တို.ရဲ.မြင်.မြတ်တဲ.ဘာသာတရားကိုခုတုံးလုပ်လို.
သူတောင်းစားပြဿနာကတော. နိုင်ငံတိုင်းခေါင်းခဲရတဲ. ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ. ကိစ္စကြီးဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို. အပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းကလဲ ပပျောက်ဘို. အတွက် နည်းမျိုးစုံသုံးလို. ကြိုးပမ်းပေမဲ.မပျောက်သေးပါဘူး။
သူတောင်းစားဆိုိတိုင်း ဆင်းရဲတယ်မထင်ပါနဲ. သူတို.၀င်ငွေက သာမန်လူထက် ၀င်ငွေကောင်းပါတယ်။
အိမ်ပိုင်ယာပိုင် နဲ.TV တို. DVD စက်တို.နဲ.နေနှိုင်တဲ.သူတောင်းစားတွေလဲရှိပါတယ်။
သည်သူတောင်းစားတွေကို ထည်.မယ် မထည.်ဘူးဆိုတာကတော. ကိုယ်.အတွေးကိုယ်.ခံစားချက်နဲ.ကိုယ်ပါ။
ထည်.တာမှားတယ် မထည်.တာမှန်တယ်၊မထည်.တာမှားတယ် ထည်.တာမှန်တယ်
ဆိုတဲ.ဘယ်ဘက်က မှန်တယ် ဆိုတာ ကလဲ အတော်ကို ဖြေဘို.မလွယ်တဲ.မေးခွန်းပါ၊
တစ်ခါကခေါက်ဆွဲဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စားနေတုန်း သူတောင်းစားတစ်ယောက် ၀င်လာပါတယ်။
သူတောင်းစားက စားပွဲတစ်ဝိုင်းကိုသွားတောင်းတဲ.အခါ အဲဒီစားပွဲကလူက လေသံမာမာနဲ.မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ဘေးစားပွဲက လူက စားပွဲတစ်လုံးမှာ သူတောင်းစားကိုထိုင်ခိုင်းပြီး ဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်လို.သူတောင်းစားအတွက်
အဲလိုမှာပေးတာလဲမြင်ရော စောစောကမောင်းထုတ်တဲ.လူရယ် သူတောင်းစားထိုင်နေတဲ.စားပွဲဘေးမှာထိုင်နေတဲ.အတွဲတစ်တွဲရယ်က စားလက်စကိုဆက်မစားဘဲ ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီးထွက်သွားပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ တကယ်ပြဿနာတက်သူက ဆိုင်ရှင်ပါ။
ဒါနဲ. ဆိုင်ရှင်က မှာပေးတဲ.သူကို သူတောင်းစားအတွက် ပါဆယ်ထုတ်ပေးမယ် ပြောတဲ.အခါ ဟိုလူက
“မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ. ကျနော်.ဆိုင်က ကိုယ်ထမင်းကို ကိုယ်ရှာစားတဲ. သူတွေထိုင်စားဖွင်.ထားတာပါ”
ကျနော်က တော.အားလုံးကိုပပျောက်စေချင်တာ အမှန်ပါဘဲ။
ကျနော် အပပျောက်စေချင်ဆုံး ကတော. သူတောင်းစား အမည်မခံတဲ.သူတောင်းစားတွေကိုပါ။
နေရာတော်တော်များများမှာ ပေးထားတဲ. လုပ်ပိုင်ခွင်. ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင်.တွေကိုလက်တစ်လုံးခြား အသုံးပြုလို.
လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက် တဲ.အခါမှာ ကျနော်တို. ခင်ဗျားတို.ဆီကနေ လုပ်ငန်းတစ်ခုအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်ဘို.အတွက်
ငွေကြေးလက်ဆောင် တစ်စုံတစ်ခုကို အသံတိတ်ဖြစ်စေ ပေါ်တင်ဖြစ်စေတောင်းခံတတ်တဲ.လူတန်းစားတွေကို ပပျောက်စေချင်ပါတယ်။
မပေးရင်အချိန်ကြာမယ် ခက်မယ် ပေးရင်မြန်မယ်။
သည်လိုလူမျိးတွေကိုပပျောက်စေချင်တာကိုတော. အားလုံး သဘောတူမယ်ဆိုတာကိုတော.အကြွင်းမဲ.ယုံကြည်ပါတယ်။
သူတောင်းစားက နိုင်ငံတိုင်းရှိတာပါပဲ။ ဒါက..လူ့ယဉ်ကျေးမှုတခုကိုးဗျ..နော..။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်ကတင်..ရက်နက်ခ်(လည်ပင်းနီ)..(အဖြူတယောက်က တောင်းစားနေရင် ခေါ်တဲ့အမည်) တယောက်က ကျုပ်ဆီ အကြွေနည်းနည်းပေးဖို့ လာတောင်းပါတယ်။
ဈေးဝယ်သွားတဲ့ ဆိုင်ရှေ့ မှာပါ။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲ့ မြို့ နယ်တခုမှာဆိုပါတော့..။
သူက ဗိုက်အရမ်းဆာနေပြီး …မျက်စိလည်း သိပ်မမြင်ရဘူးဆိုပါသေးတယ်။ အရက်နံ့ရတာမို့ … ငြင်းလိုက်တော့ ..ကောင်းသောနေ့ပါဆိုပြီး လှည့်ထွက်သွားပါတယ်။
ယူအက်စ်မှာ…သူတောင်းစား(လူတွေဆီ ငွေလိုက်တောင်းနေသူ)..ဆိုတာထက်..အိမ်မရှိတဲ့..လမ်းဘေးမှာတဲထိုးနေသူတွေကပိုများပါတယ်..။ Homeless ပေါ့..။
သူတို့ကို စောင်တွေ…ခေါင်းအုံးတွေ..တဲလုပ်ရမဲ့ တန့်တွေ အစိုးရနဲ့..ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ များကပေးပါတယ်..။
မနက်စာတွေ့ဖူးတာမှာ…ပါမုန့်နဲ့..အသီးအရွက်နဲ့..ဒိုးနတ်နဲ့..အကျအနပါ…။ မနက်ဆိုလူတန်းစီနေတာ တော်တော်ရှည်သမို့ …တခါတလေ..မနက်ပိုင်းတွေ့မိရင်..၀င်တောင်..တန်းစီစားချင်စိတ်ပေါက်အောင်..ကောင်းတဲ့အစားအစာတွေပါတတ်ပါတယ်..။
နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေမှာ..တချို့ သူတွေ..ငွေစက်ကူအထပ်လိုက်…ယူလာပြီး..တယောက် ၁၀၊ ၁၀၀ စသဖြင့်ဝေနေတာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်..။
အဲဒီလိုလူတွေကို…အဲဒီလိုဖြေရှင်းနေကြတာတွေ့ဖူးပြီး…သူတို့တွေ(Homeless)တဥိးချင်းစီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ..အင်မတန်..ထူးပေသည့်အံ့ ရာသော်တွေလည်း…ရှိတတ်ပါတယ်..။
(ဥပမာ..အဲဒီ ထဲကတယောက်က… ဒေါက်တာရိတ်(ပါရဂူ)ဘွဲ့ ရဖူးတာမျိုးပါ။ ရှင်းရင်ရှည်လျှားမှာမို့ ..ထားခဲ့ပါရစေ)
ဆိုလိုတာက..ဒီလိုလူတွေပပျောက်အောင်….လုပ်ဖို့ တာဝန်အရှိဆုံးက..အစိုးရဆိုတဲ့..ဒါမျိုးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ ..လူထုဆီကငွေယူထားပြိး အလုပ်လုပ်နေတဲ့..အဖွဲ့ အစည်းကြီးဖြစ်ပြီး..သူတို့နောက်ကတော့..ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ တွေဖြစ်ရမှာပါ။
မြန်မာပြည်လို နိုင်ငံမျီုးမှာ… ဒါမျိုးကလေးတွေ..တောင်းစားခိုင်းတာရှိနေတာ..အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာပါ။
ကားတစင်းမောင်းလာပြီး လူကိုမတော်တဆ ထိမိတိုက်မိရင်..၀ိုင်းဝန်းဆုံးမတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့…မြန်မာပြည်ကလူတွေ..ဘာလုပ်နေသလဲ..။
ရန်ကုန်မှာဆိုလဲ ဒီလိုမျိုးတွေ တွေ.နေရတာပါပဲ ။။
တချို. ဆိုရင် ဘယ် ကျောင်းတိုက်က ဘာအတွက် အလှူခံတာပါဆိုတဲ့ စာအိတ်လေးတွေနဲံ.လိုက်တောင်းတာတွေ တွေနေရပါတယ်။ ဒီကျောင်းတိုက်နာမည်တွေ သုံးပြီးတောင်းနေတာ တွေ ဒီကျောင်းတိုက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ တဲ့ခြားသံဃာတွေအတွက်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာ ညိုးနွမ်းစရာပါ။ ပြီးတော. ကမ္ဘာ မှာ ကျွန်တော်တို. မြန်မာတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ် ဂုဏ်ယူ ၀င့် ကြွားစရာ ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီးမှာ လည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တွေ တွေနေရတာပါ။ တချို. သူတောင်စားလေးတွေက
နိုင်ငံခြားသားတွေ ဆီကတောင်းရမ်နေတာ တွေနေရတာဟာ တော်တော် ၇င်နာဖို.ကောင်းပါတယ်။
စာရေးသူကတော်လိုက်တာနော် ။ ထိထိမိမိပြောသွားနိုင်တယ် ။ ဟုတ်ပါ့ တချို့ဆို သူတောင်းစားအမည်မခံတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိသူတောင်းစားတွေလည်းရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ အဆက်သွယ်မလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်း တချို့ သော documentation ကိစ္စလေးတွေအတွက် တွေ့ရတဲ့အခါ မပေးရင်ကြာမယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ တရက်ကနေ တစ်ပတ်ရွှေ့ တာကနေ အခုဆိုရင် 1လကျော် အထိ အဲ့ဒီ documentation ကိစ္စ မပြီးသေးပါဘူး ။ ပိုက်ဆံနည်းနည်းပေးရင်တော့ နေ့ချင်းတောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါသတဲ့လေ ။ ကပ်စေးနည်းပြီးစေတနာမရှိတာရယ် ၊အဆိပ်ပင်ရေလောင်းသလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ရယ်ကြောင့် အဲ့ဒီ document တခုရဖို့ အခုထိ pending ဖြစ်နေတုန်းပါ
I don’t know much about other country,
Government take full responsible to his people ( not only to citizen also to Permanent Resident ).
Government take responsible for eating, clothing, staying, education & medical of all unemployed persons.
Basically, Center link ( Government ) pays 1000 dollars per month to every unemployed ( jobless ) persons.
Ifacouple ( both husband & wife ) were unemployed then 2000 dollars per month.
Ifacouple have one son or daughter ( 18+ year ) then 3000 dollars per month.
In addition, house rent fees, furniture rent fees & etc, government paid.
Moreover, free & nearly free for medical treatment, education fee & transportation fee.
So, if the family with2parents &2sons or daughters ( 18+ years ) all unemployed,
normally they got about 4000 dollars per month & other benefits from Government.
So, this family can send back about 500 Dollars ( 400000 Kyats ) per month to Myanmar.
( all of them no need to work & easily send back 400000 Kyats to Myanmar )
( some of them buy brand new car withoutajob )
I don’t know this system is good or not,
but I see so many Myanmar families stay like this in Australia.
No need to work, take money from Government,
buy brand new cars, send money back to Myanmar.
Above comment is just for your information, knowledge & consideration.
အဲ့ဒါဆိုရင်… Australia ကို မြန်မာပြည်ကနေ တိုက်ရိုက်သွားပီး…ဘယ်လို အခြေချနေထိုင်လို့ရမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးရေးပေးကြပါအုန်း…
Australia မှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ် အခြေအနေလေးတွေလည်း ဆောင်းပါးရေးပေးကြပါအုန်း… ရေးပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။